Akụkọ - Gịnị bụ nzacha achicha ma ọ bụ akwa mmiri nzacha nke nzacha akwa na nzacha press?
Gịnị bụ nzacha achicha ma ọ bụ akwa mmiri filtration nke nzacha akwa na nzacha pịa?
Dị ka anyị maara, maka ịhọrọ akwa nzacha kwesịrị ekwesị, anyị ga-ejikọta data ngwọta ya na akwa nzacha.
Ọ bụrụ na njupụta nke ákwà nzacha dị oke elu, nke nwere ike ime ka mmepụta ahụ dị ntakịrị ma mee ka ikike nke ntanye ntanye ahụ pụta, nke ahụ nwere ike iduga na-enweghị ike ịnweta achicha nzacha na ụfọdụ mmiri ọdịnaya n'oge ụfọdụ, ụfọdụ ọbụna enweghị ike ịnweta. achicha na mgbe slurry ala.
Ọ bụrụ na njupụta nke ákwà nzacha dị oke ala, nke nwere ike ime ka nsogbu na-agbapụta n'ezie.
Mgbe anyị na-ahọrọ ndị kwesịrị ekwesị nyo ákwà, ma gịnị mere dị ka ọ dị na mbụ filtrate ka ruru unyi na mmalite mgbe anyị dochie ọhụrụ nyo ákwà?Na nke a onu bụ ọtụtụ ndị na-eme karịsịa maka ụfọdụ mma ahụ ngwọta ọgwụgwọ.
Nke ahụ n'ihi na na mbụ ogbo, nzacha ihe naanị nwere ike ịnakọta irighiri na size ibu karịa ha na-emeghe size, otú ndị nta ahụ ga-agafe na filtrate bụ unyi, nke kwesịrị ịlaghachi azụ nri circulate.
Ma mgbe a na-anakọta ọtụtụ ihe ndị ọzọ, a ga-enwe akwa oyi akwa n'etiti ngwọta nri ọhụrụ na akwa nzacha nke nwere ike inye aka maka nzacha, ihe a na-akpọ bridge filtration ma ọ bụ achicha filtration.Mgbe obere oge gasịrị, nzacha ga-adị ọcha, mgbe niile nwere ike nweta achicha nzacha kwesịrị ekwesị dị ka achọrọ.
Ozi ọ bụla ọzọ achọrọ maka azịza nzacha, n'agbanyeghị akwa nzacha ma ọ bụ igwe nzacha, nweere onwe gị ịkpọtụrụ Zonel Filtech!